SEENAA SOCHII QEERROO FI QABSOO OROMOO. | QEERROO
Yaadni isaanii bakka sadii ture. Maqaa Somlaaleetiin eegaluu.Maqaa Oromoo fi Oromiyaan socha’uu fi Maqaa Itoophiyaan socha’uu kan jedhu. Kaayyoon isaanii inni dhumaa garuu Bilisummaa Ummata Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa ture. Yeroo san mootummaan somaalee illee rakkoo Ulfaataa irraan ga’aa turte waan ta’eef. Dhumarratti wanni irratti waliif galan nuti keeysa keenyatti maquma Oromootiin biyya seenuutu nu baasaa irratti wal ta’an.